pet blower for sale - .ရာဝတီ
Professional ကအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Wall တပ်ဆင်ထားခြောက်စက်
၎င်းသည်အင်အားကြီးမားသောနံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့်ခြောက်စက်ဖြစ်သည်. စွမ်းအားပြည့်သော်လည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေမှုတ်စက်သည်ဆေးကြောသန့်စင်သည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုဖြုန်းတီးသောအခါလူကိုလက်ဖြင့်လွှတ်ခွင့်ပြုသည်. အာကာသချွေတာရန်လိုအပ်သည့်အလှပြင်ဆိုင်များသို့မဟုတ်အဆောက်အ ဦး များအတွက်ကောင်းမွန်သည်, ဒီလေမှုတ်စက်ကိုနံရံပေါ်အလွယ်တကူတပ်နိုင်သည်.
အဆင့်မြင့်နည်းပညာ & လုံခြုံမှု: ၎င်းတွင်လေစီးနှုန်းနှင့်အပူချိန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်. ဒီနည်းပညာ၏အောင်မြင်မှုများသည်သဘာဝအပူနှင့်တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, insulator တွင်လည်းစစ်ဆင်ရေး. ၎င်းသည်သီးသန့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်. ၎င်း၏အခွံပါ ၀ င်ပစ္စည်းများနှင့်လေထွက်ပေါက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်. လေမှုတ်စက်သည်ဆူညံသံနည်းသည်, လေပြင်းမုန်တိုင်း.
အချိန်သိမ်းဆည်းပါ & ပိုက်ဆံ: ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်မီဆန်းပြားသောမော်တာသည်စွမ်းအင်ချွေတာသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသက်သာစေနိုင်သည်. ရေရှည်တည်တံ့မှု: ကျွန်ုပ်တို့သည်လေမှုတ်စက်ကိုကြာရှည်ခံနိုင်စွမ်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်. သံမဏိကိုယ်ထည်သည်သံချေးမတည်ဆောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး၎င်းသည်ဤယူနစ်သည်သင့်အားနှစ်ပေါင်းများစွာအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်, စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး applications များအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်.
နောက်ဆုံးပေါ်ခွေးအခြောက်ခံစက် Professional Screen Dog Blow Dryer ပါသောခွေးဆံပင်အခြောက်ခံစက်သည် Low-Noise ဖြစ်သည်
Happy Bear ခွေးခြောက်စက်သည်သေးငယ်သည်, ရေကိုမှုတ်ထုတ်နိုင်သည့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အခြောက်စက်, ဖုန်, အပျက်အစီးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှ undercoat ကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာ. It has LED screen and functional buttons to adjust air flow and heating temperature. ဒီနည်းပညာ၏အောင်မြင်မှုများသည်သဘာဝအပူနှင့်တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, insulator တွင်လည်းစစ်ဆင်ရေး. ၎င်းသည်သီးသန့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်. ၎င်း၏အခွံပါ ၀ င်ပစ္စည်းများနှင့်လေထွက်ပေါက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်. လေမှုတ်စက်သည်ဆူညံသံနည်းသည်, လေပြင်းမုန်တိုင်း.